Madaxweyne Farmaajo “Mabda’a dhabta ah oo loo baahan yahay kulligeen waa inaan qaadano Wadaniyad” – Bulshoweyn Media Network
Madaxweyne Farmaajo “Mabda’a dhabta ah oo loo baahan yahay kulligeen waa inaan qaadano Wadaniyad”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo ku aadan sannad guuradii 58-aad ee kasoo wareegatay maalintii xorriyadda gobollada waqooyi ee dalka, islamarkaana dhul Soomaaliyeed oo xor ah laga taagay calan Soomaaliyeed, u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in qof kasta oo Soomaali ah ay mas’uuliyad weyn ay ka saaran tahay xaqiijinta hiigsiga soo jireenka ah ee ku qotoma Soomaali xor ah oo mideeysan.
“Mabda’a dhabta ah oo loo baahan yahay kulligeen waa inaan qaadano Wadaniyad, waxaa hubaa hal sano iyo bar wax wadaniyad ka hadlayay waa yaraayeen, waa laga baqayay, waxa kaliya ee dalkan ku hormarayo oo aan ugu adkaaneyno waa qabyaalada iyo daneysiga inaan iska ilaalino” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo oo hadalkiisa wata ayaa yiri “Xorriyadda aan maanta ku naalooneyno waa mid lagu soo bixiyay dhiig iyo dhaqaale, waxaan maanta joognaa guul, taasoo kasoo bilaabatay 1960-kii markii ay waqooyi iyo koonfur isku darsameen, waxayna guushaasi ahayd mid ummadda u horseeday midnimo iyo soomaalinimo.”
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay shacabka gobolada waqooyi kaallinta lama illaawaanka ah ee ay ku lahaayeen gobonnimo doonkii iyo israacii Waqooyi iyo Koonfur.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dareenkaasi midnimo iyo wada-jireed uu ku dhex nool yahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, inkastoo duruufo adag ay soo mareen, wuxuuna carabka ku adkeeyay in qabyaaladda iyo daneeysiga looga adkaan karo in la muujiyo waddaniyad iyo wadajir.